Huawei Watch GT3 waa daahirinta qaacidada guulaysata [Falanqaynta] | Warka Gadget
Miguel Hernández | | qalabka, General, Reviews, Smartwatch
Dharka la gashado ayaa ku jira moodada, inkastoo xaqiiqda ah inaysan u muuqan inay dhammeeyaan bilawga, sannadihii la soo dhaafay, inkasta oo joojinta ay sababtay masiibada, saacadahan casriga ah waxay noqdeen kuwo caan ah iyada oo ay ugu mahadcelinayaan hawlahooda aan la tirin karin iyo dabcan horumarinta waxqabadkooda. Kiiskan Huawei ayaa muddo dheer soo bandhigtay qaar ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan dhulka saacadaha smartwatches, wayna sii wadi doontaa inay sidaas samayso.
Waxaan falanqeyneynaa Huawei Watch GT 3-da cusub waxaa loo dejiyay sidii loo hagaajin lahaa noocii hore waxayna ilaalineysaa go'aankeeda adag ee Harmony OS. Waxaan falanqeyneynaa Huawei smartwatch kii ugu dambeeyay uguna awooda badan ilaa maanta, nala soo ogow.
1 Naqshad la aqoonsan karo oo guul leh
3 Dareemayaasha iyo isticmaalka kala duwan
4 Tababarka, isticmaalka iyo madax-bannaanida
Naqshad la aqoonsan karo oo guul leh
Xaaladdan oo kale, Huawei ma rabto in ay ka baxdo canonskeeda ku saabsan saacadda smart, iyada oo ka ilaalinaysa qaabka dhaqanka ee ka fog waxa ay rabaan noocyada kale sida Apple iyo Xiaomi. Waxaan haynaa laba sanduuq, 42,3 x 10,2 millimeters iyo 46 x 10,2 millimeters iyadoo ku xidhan baahidayada. Saacaddu waxay miisaankeedu noqon doontaa qiyaastii 35/43 garaam oo aan lahayn suunka, waxayna dareemeysaa la safeeyey oo si wanaagsan loo dhisay, iyo sidoo kale inay caado u tahay astaanta Shiinaha. Marka la eego qaabka la falanqeeyay, waxaa ka mid ah suunka maqaarka brown iyo kiis bir ah oo aan lahayn midab dabiici ah, xarrago leh oo isku dhafan.
Noocyada: 42 iyo 46 millimitir, dhaqameed iyo "ciyaaraha"
Midabada: Gold, Rose Gold, steel iyo Black.
Xargaha: Milanese, silicone, maqaar iyo bir.
Dahaarka dhoobada ee dhabarka
Dhinacan waxaan horeyba u ognahay in aan haysano nooc gacan labaad ah oo ku jira qaabka ama mid dhaqameed iyada oo ku xiran nooca la doortay iyo cabbirka shaashadda. Waxaa mudan in la xuso, si aan loo jahawareerin akhristaha, in aynu ku falanqeyno nooca 46-millimitir ah oo leh suun maqaar ah oo bunni ah iyo dabool dhaqameed oo midab bir ah. Aragtidayda, saacaddu waxay ilaalisaa saamiga wanaagsan, naqshad aan la beddeli karin iyo dareenka wax-ku-oolka ah iyo xarrago muhiim ah, waxay ku raaci kartaa dhacdo rasmi ah iyo jimicsiga, wax aad maskaxda ku hayso markaad bixinayso sifooyinkan. .
Xaaladdan oo kale, Huawei waxay dooratay ARM Cortex-M, Iyadoo aan sidaas loo hirgelin processor-yada iskood u sameysan ee kuwa aan wax badan ka naqaanno. Tani waa war wanaagsan sababtoo ah waxay xoojinaysaa isku-dhafka Harmony OS, laakiin waxay naga dhigaysaa inaan la yaabno mustaqbalka soo-saareyaasha astaanta Aasiya. Dhanka xusuusta RAM-ka, ma hayno macluumaad gaar ah, waxaan haynaa qiyaastii 4 GB ee kaydinta guud, oo loo yaqaano «ROM».
Makarafoon la isku daray si looga jawaabo wicitaanada
Codbaahiyaha isku dhafan
Cadaadiska ilaa 5 ATM
Waxaan haynaa saacad leh xiriir Jiilka 5.2-aad ee WiFi iyo sidoo kale Bluetooth XNUMX Markaa waxaan haysanaa fursado badan oo wireless ah. Ma hayno wakhtigan (haa qaabkii hore) lSuurtagalnimada in la isku daro eSIM ama SIM kaarka casriga ah, markaa waxaad yeelan doontaa ku tiirsanaanta buuxda ee taleefanka. Qalabku wuxuu la jaan qaadayaa Harmony OS, Android 6.0 wixii ka dambeeya iyo sidoo kale iOS 9.0 wixii ka dambeeya, taasoo ka dhigaysa beddel badan oo, si kastaba ha ahaatee, noo oggolaan mayso inaan si fudud oo degdeg ah ula falgelino ogeysiisyada ka baxsan Huawei / Honor. .
Dareemayaasha iyo isticmaalka kala duwan
CSidee u noqon kartaa haddii kale, kan Huawei Watch GT 3 Dhaxaliyayaal wanaagsan oo kala duwan oo dareemayaasha, oo ka baxsan kormeerayaasha garaaca wadnaha caadiga ah iyo mitirka buuxinta ogsijiinta dhiigga, Huawei wuxuu rabay inuu u rogo Watch GT 3 beddelka ciyaaraha iyada oo aan gabi ahaanba waxba lumin, waxaas oo dhan waxaan la socon doonaa kuwan soo socda:
Dareemaha heerkulka jidhka (waxa la hawlgelin doonaa cusboonaysiinta mustaqbalka).
Dareemka cadaadiska hawada ( barometer).
Waxaas oo dhan marka lagu daro nidaamyada cabbirka saxda ah ee goobta kaas oo GPS, GLONASS, Galilleo iyo dabcan QZSS dhammaan noocyadeeda. Tilmaamaha farsamada ee ka baxsan shaashadda iyo madaxbannaanida ayaa lagu wadaagaa cabbirro iyo noocyo kala duwan. Taasina waa sida aan uga gudubno ka hadalka shaashadda.
Nooca 46-milimitir (la tijaabiyay) wuxuu leeyahay guddi AMOLED de 1,43 inji taas oo ka dhigan kobac yar marka loo eego noocii hore, oo leh xallinta 466 × 466 taas oo bixisa cufnaanta pixel ee 326PPI. Dhinaceeda, waxaanu ku leenahay xal isku mid ah nooca 42-millimeter, markaa cufnaanta pixel waxay kordhisaa ilaa 352PPI, faahfaahinta ka soo baxda aragtidayada oo aan la fahmi karin inta u dhaxaysa hal nooc iyo mid kale.
Tababarka, isticmaalka iyo madax-bannaanida
Marka la eego habaynta gudaha AppGallery Waxaan helnaa nidaamka Huawei in ka badan 10.000 oo goobo la soo degsan karo, Inta badan waa bilaash, taasoo kugu adkeyn doonta inaadan helin mid aad jeceshahay. Waxay leedahay gariir wareeg ah oo la hagaajiyay, iyo sidoo kale badhanka is dhexgalka kaas oo hadda leh taabasho raaxo leh oo ka socdaalaysa aragtidayada.
Qaybtan Huawei waxay nooga ballanqaadaysaa TruSeen 5.0+ saxnaanta weyn ee cabbiraadaha tababarka, xaqiiqaduna waxay tahay in imtixaanadayadu ay ahaayeen kuwo wanaagsan, oo muujinaya natiijooyin la barbardhigi kara beddelka sare sida Apple Watch ama Galaxy Watch, dhammaan waxaa mahad leh siddeeddeeda sawir-dembiyeedka.
Hagaajinta algorithmamka AI oo leh heerka leexashada ee 5LPM.
Ogeysiisyada ku saabsan garaaca wadnaha ee aan joogtada ahayn.
La socodka hurdada.
Kaaliyaha codka isku dhafan.
Iyadoo aan na siin xogta saxda ah ee mAh, shirkadda Aasiya waxay noo ballanqaaday 14 maalmood oo madax-bannaani ah oo aynaan awoodin inaan gaarno, waxaan joognay inta u dhaxaysa 11 iyo 12 maalmood iyadoo si joogto ah loo isticmaalo. Dhinacyada badankooda sida codsiga iyo maamulka xogta, interface interface iyo waayo-aragnimadayada guud ee aan u leenahay, Saacaddu ma bixin wax farqi ah oo la mid ah nuqulkii hore ee la mid ah, tanina waa arrin aad u wanaagsan haddii aan ku xisaabtano in la hagaajiyay. Waxaas oo dhan waxaa lagu soo koobay qiimo laga bilaabo 249 euro oo loogu talagalay nooca 46-milimitir iyo 229 euro nooca 42-milimitir, Sicirada loo hagaajiyay si madax banaan iyadoo lagu salaynayo awoodooda, gaar ahaan laqabsiga saamiga tayada-qiimaha oo ay adagtahay in la waafajiyo qaybta. Waayo, 329 waxaan yeelan doonaa version titanium ah oo joogitaanka Spain aan la garanayn hadda.
La soco GT 3
Naqshad aad loo sifeeyay
Ka buuxa farsamada iyo beddelka, iyada oo aan la'aanta dareemayaasha
Awood is-beddel weyn
Qiimo aad u adag
Waa in aan la qabsanaa bisilka wareega
Interface-ka isticmaaluhu waa wax cusub oo u baahan waxbarasho
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Huawei Watch GT3 waa daahirinta qaacidada guusha leh [Falanqaynta]
Starkvind waa qaacidada IKEA ee dib u cusboonaysiinta hawada sifeeyaasha [Falanqaynta]